Bocas Bali Luxury Water Villas | Goobaha loo dalxiis tago ee Bocas del Toro - Hoteelada raaxada Panama
Baxsashada raaxada ee Jasiiradda Gaarka loo leeyahay ee Panama
Dib u furmay Sebtembar
Dalxiiska dadka waaweyn 16+
Cunnooyinka Epicurean iyo Cabitaanada lagu daray
Ma jiro burin ama Beddel Kharash
"Inaad noolaato waa waxa ugu yar adduunka. Dadka intiisa badan ayaa jira, waa intaas." - Oscar Wilde
Naqshadeeye Andres Brenes, oo caan ku ah naqshadaynta huteelka ugu galmoodka badan adduunka, ayaa sameeyay farshaxan kale oo soo jiidasho leh. Marka la eego aragtida Bocas Town ee ku taal Bocas Del Toro, Panama, waxay ku taal Balinese aan caadi ahayn oo u waxyoonay qulqulka biyaha, Bocas Bali, oo la tartamaysa meelaha ugu xiisaha badan adduunka. Martigeliyaha soo jiidashada leh ee Scott Dinsmore ee dalxiiskayaga ayaa hubiya soo dhawayn diiran, waayo-aragnimo aan la ilaawi karin martidayada, kuwaas oo ku raaxaysan isku dhafka dhifka ah ee aan rasmiga ahayn ee goobta Kariibiyaanka ah ee quruxda badan.
Xeebta Cirka ee Koowaad ee Adduunka
Lagu Dhisay Biyaha Dushooda Dusha sare ee Saqafyada
Talaabo toos ah uga gudub jidka wayn ee loox socodka una sii jeedo xeebta Kupu-Kupu, oo ay ka muuqato Bar Tipsy Bar oo dhawaan caan noqon doonta. Qooy qoraxda iyo neecawda oo iska hubi inaad la kulanto jaranjarada barkadda u eeg ee u socota biyaha cad ee Kariibiyaanka ah ee diiran ee weligeed ah si aad u dabaasho galabtii.
Martidayadu waxay ku raaxaystaan ​​1,100 cagood oo laba jibbaaran oo nolol alfresco ah oo cajiib ah, oo ku nasanaya saqafyada badda Kariibiyaanka. Marka lagu daro barkad gaar loo leeyahay iyo barxad, guri kasta waxa ku yaal sariir boqor oo leh maro wanaagsan iyo muqaal dhagax saabuun ah oo gacanta lagu xardhay oo qurux badan. Habka dhaqameed ee Balinese, farshaxannadu waxay u qoondeeyeen in ka badan 1,000 saacadood si ay u xardhaan alwaaxa teak ee Villa kasta.
Cunto & Cocktails
Khibradaada cunto ee Guriga Elephant iyo The Coral Café waxay hor marisaa qiimaha dhaqameed ee loo dhan yahay oo ay door bidayaan deegaanka, maaddooyinka beeraha-cusub iyo cuntada badda ee gobolka ee laga helo kalluumaysatada Bocas. Waxaa dhiirigeliyay aqalkayaga aqalka dhirta lagu koriyo, oo ah maskaxdeenna udugga suxuunta cusub cunto kasta.
Si toos ah uga dabaasha ama uga dhufo gurigaaga villa biyaha dushooda. Ama sahamin biyaha Kariibiyaanka ee ku hareeraysan jasiiradayada iyada oo loo marayo kayak ama paddleboard. Waayo-aragnimada snorkeling ee qarsoon, jasiiradda yar ee si toos ah uga soo horjeedda filooyinka waxay martigelisaa nolosha badda xiisaha badan.
Biyaha cerulean ee Bocas Bali waa diiran sanadka oo dhan. Laakin haddii aad ka door bidayso biyaha saafiga ah biyaha cusbada leh, barkaddeena quruxda badan ee guriga naadiga ayaa ah meel xasiloon oo lagu maydho.
Farshaxanka iyo Naqshadeynta Dhismaha
Iyada oo leh Undertones Rich Balinese
Jasiirad yar oo gaar loo leeyahay oo ku taal Bocas Del Toro ayaa laga yaabaa inay noqoto meesha ugu dambaysa ee aad ka filan karto inaad la kulanto qaab dhismeedka cajiibka ah ee lagu wanaajiyey sawir-gacmeedyo saabuun ah oo gacanta lagu xardhay iyo laba-tan oo sonkor ah oo xidid farshaxan dabiici ah oo qurxinaysa maxkamadda alfresco ee marmar. Kuwa jecel farshaxanka - yaabab badan ayaa sugaya.
Ilaalinta Diirarka Coral
Waxaan aad u jecelnahay ilaalinta quruxda dabiiciga ah ee jasiiraddeena gaarka ah iyo biyaheeda. Bocas Bali ayaa 100% ka baxsan shabkada Dooxooyinka Catchment waxay ku kaydiyaan 55,000 gallon oo biyaha roobka ah si ay u bixiyaan dhammaan baahiyaha biyaha macaan ee la sifeeyay. Qorraxduna waxay soo saartaa korontadeena qaab tamarta qoraxda ah.
Lagu soo bandhigay: